သဒ္ဓါလှိုင်း: စာပေအလင်းခေတ် တစ်ခေတ်ဆီသို့
လူ့ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာသည့် အလျောက် လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့၊ ဒေသတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၊ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်နှင့်တစ်ပြည်ပြန်လှန် ဆက်ဆံမှု. ရင်းနှီးမှု. ကရုဏာတရားထားမှု. တရားမျှတမှု. ဖွံ့ဖြိုးမှု. လှပသော လူ့ဘောင်လောက တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းအောင် ပံ့ပိုးနိုင်သည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည့် အသိဥာဏ် ပညာနှင့်ပြည့်စုံအောင် စာဖတ်ခြင်းသည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပေသည်။ ထိုသို့ စာဖတ်သည့်အခါ မည်သည့်စာပေ အမျိုးအစားမျိုးကို ဖတ်သင့် ပါသလဲဟု မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့မိကြပေ လိမ့်မည်။ သုတစာပေ၊ ရသစာပေ ဟု ဆိုသော စာပေသည် မည်ကဲ့သို့ စာပေဖြစ်သလဲဟု ခွဲခြား နားလည်နိုင်ရန်လည်း လိုအပ် လှပေသည်။
သုတ စာပေ ဆိုသည်မှာ စာဖတ်သူ၏ ဦးနှောက်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်ပေးသော အသိ ဖြစ်သည်။ ရသစာပေ ဆိုသည်မှာ စာဖတ်သူ၏ ရင်တွင်းနှလုံးသား ထဲသို့ ဦးစွာရောက်လိမ့်မည်။ ရသစာပေသည် ဖန်တီးသည့်သူ၏ နှလုံးသားနှင့် ဖတ်သည့်သူ၏ နှလုံးသား နီးစပ်လျှင် ရင်ထဲသို့ ရောက်ပေမည်။ ထိုမှတဆင့် ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာတင် မနေပဲ ဦးနှောက်ထဲသို့ ရောက်ပြီး ခံစားသိရှိမည်.. ခံစားပြီးမှ သိသည့်အသိ တစ်ခုရမည်.။ ထိုဦးနှောက်ထဲမှ အသိက တစ်လောကလုံးကို ဖြန့်ပြီး အလင်းရောင်ပေးနိုင် သည့် ဘဝအသိမျိုးတစ်ခုကို ရပြီဆိုလျှင် အကောင်းဆုံး ရသစာပေ တစ်ခုဖြစ်မည်.။
ရသစာပေသည် ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မပြောပေ၊ နှလုံးသားထဲကို တိုက်ရိုက် ထည့်မပေးပေ.၊ စာဖတ်သူကို ခံစားခိုင်းလိမ့်မည်. ထိုသို့မခံစားရလျှင် ရသစာပေကောင်း မဟုတ်ပေ။ ရသစာပေ ကောင်း မကောင်းကို နှလုံးသားနှင့် စတိုင်းပြီး ဒိထက်ကောင်းမကောင်း ဦးနှောက်နှင့် တိုင်းမည်.။ နှလုံးသား၏ ခံစားမှုက ဦးနှောက်ကို တက်လာပြီးတော့မှ ခံစားသိဆိုသည့် အသိတစ်ခုကို ပေးလိမ့်မည်၊ တကယ်ကို ကောင်းသည့် ရသစာပေသည် ဦးနှောက်နှင့်သိသည့် ခံစားသိမှနေပြီး မိမိဘဝ တစ်လျှောက်လုံးကို သော်လည်းကောင်း၊ လောကနှင့်ဆိုင်သော အမှန်တရားကိုသော် လည်းကောင်း အလင်းတစ်ခု ပွင့်ကနဲ ထွက်သွားပေလိမ့်မည်. ထိုအရာသည် ရသစာပေ၏ အကောင်းဆုံးပေတံ တစ်ခုဖြစ်သည်.. ဆိုသည်ကို စာရေးဆရာ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုံး) ၏ ကျေးဇူးကြောင့် သိခွင့်ရခဲ့လေသည်။
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်က “ရသစာပေကောင်းတစ်ခု မည်သည်မှာ စိန်တစ်ပွင့်ကို နေရောင်လက် သလို ဖျတ်ဖျတ် ဖျတ်ဖျတ်နှင့် dimension မျိုးစုံမှာ အရောင်တွေ ထွက်နေတတ်တယ်..၊ ခံစားသည့်သူက ကြိုက်သလို ခံစားပြီး အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်” တဲ့။
ထိုသို့ လူ့လောကအတွက် အရေးပါသည့် ရသစာပေကို ကွယ်ပျောက်တော့မယောင် ပြောနေကြလေသည်။ လူသားများ ရှိနေသရွေ့ ရသစာပေ မပျောက်ပျက်နိုင်ပါ။ ခေတ်ကာလ ရွေ့လျားလာသည့် အလျောက် ရသစာပေ ရေးသားသည့် စာရေးဆရာများ နည်းပါးလာသလို အသစ်သော ရသစာပေများ နည်းလာပေသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးဆရာကြီးများ ရေးသားခဲ့သော ရသစာပေများ ကို ပြန်လည် ပုံနှိပ်သင့်ပေသည်။ ဝတ္ထုရှည် ရသစာပေများ နည်းလာသော်လည်း ဝတ္ထုတို ရသစာပေများ ထွက်ရှိနေသည်ကို တွေ့နေရလေသည်။ နှလုံးသားနှင့် ခံစားမှုများကြား သက်ဝင် လှုပ်ရှားနေကြသော လူသားများ အတွက် ရသစာပေကောင်းများ အစဉ်မပြတ် ပေါ်ထွက်လာမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၊ ဆရာ မြသန်းတင့်၊ ဆရာ သော်တာဆွေ၊ စာရေးဆရာ သိန်းဖေမြင့် ရေးသားသော အရှေ့ကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာ၊ ဗန်းမောင်တင်အောင် ရေးသားသော ငသြ၊ ဘုန်းမောင်တစ်ယောက်ထဲရယ်၊ ဂျာနယ်ကျော် မမလေး ရေးသားသော သူလိုလူ၊ ရင်နင့်အောင်မွှေး၊ သွေး၊ ဆရာမ ခင်နှင်းယု၊ ဆရာမ ခင်ခင်ထူး ရေးသားသော မအိမ်ကံ၊ ဆရာမ ဂျူးရေးသားသော ပင်လယ်နှင့်တူသောမိန်းမများ၊ ကဲ့သို့ ရသစာပေကောင်းများ ရေးသားမည့် ဆရာ ဆရာမများ ထွက်ပေါ်စေချင်ပါသည်။ ထိုစာအုပ်များ ဖတ်ပြီးသည့်အချိန်တွင် ဦးနှောက်ထဲသို့ တွေးစရာများ ရောက်လာပြီး ခေါင်းထဲသို့ ရိုက်မသွင်းပဲ ခံစားသိမှတဆင့် ဘဝအတွက် တန်ဖိုးရှိသော အလင်းရောင် တစ်ခုကိုပေးနိုင်သော ရသစာအုပ်များ ဖြစ်လေသည်။ မိမိ ဖတ်လိုက်သည့် စာပေထဲမှ အကြောင်းအရာသည် နှလုံးသားထဲသို့ စူးစိုက် နစ်ဝင်နေလျှင် တခြားသော သူများကိုပါ ပြန်လည်ဝေမျှ ပေးနိုင်လေသည်။ ထိုသို့ ရသစာပေများ မပျောက်ပျက်အောင် ရေးသားရန် လူငယ်များတွင် တာဝန် ရှိပေသည်။
ထိုတာဝန်များ လက်ဝယ် ကျေပွန်စေရန် လူငယ်များ စာဖတ်ခြင်းကို မြှင့်တင်ရပေမည်။ စာဖတ်အား တဖြည်းဖြည်း အားကောင်းလာစေရန် အရေးကြီးပေသည်။ ယနေ့ ဖမ်းစားလာသည့် အိုင်တီ နည်းပညာခေတ် ကာလ တိုးတက်လာသည့် အလျောက် စာအုပ်များ ဖတ်ရှုမှု အားနည်း လာသည်ကိုတွေ့နေ ရပေသည်။ လူငယ် အများစုမှာလည်း လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ ရောက်ပြီး ပြည်ပသို့ထွက် အလုပ်လုပ်ရသည့် ဦးရေ များပြား လာသည်လည်း စာဖတ်အား နည်းလာသည့် အကြောင်း တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ စားဝတ်နေရေး အရ ဖိစီးမှု များပြားလာသော အချိန်အခါဖြစ်၍ စာအုပ်၏ဈေးနှုန်း မြင့်တက် လာမှုကြောင့်လည်း စာဖတ်ချင်သည့် လူငယ်များဖြစ်ပေသည့် စီးပွားရေး အခက်အခဲကြောင့် မဖတ်ဖြစ်တော့ပေ။
ထိုအခါ စာဖတ်ခြင်း လျော့နည်းလာခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင် ရှိနေသော အခြေအနေကို လေ့လာ သုံးသပ်ရပေလိမ့်မည်။ စားဝတ်နေရေး ဖိစီးမှုလျော့ပါးစေရန် စီးပွားရေး ကို ပြေလည်အောင်နှင့် ပညာရေး ကိုမြှင့်တင်ပေးရမည်၊ ရသစာအုပ်ဟောင်းများကို တန်ဖိုးနည်းနည်းဖြင့် အရေအတွက် များများ ထုတ်ဝေသင့်သည်။ ထိုမှတဆင့် အားလပ်ချိန်များ ရလာစေရန် ပံ့ပိုးပေးရမည်။ ကျောင်းများတွင်လည်း ရသစာပေကို စနစ်တကျပြဌာန်း သင်ကြားပေးသင့်သည်။ ရသစာပေဖြစ်မည့် ပင်ရင်းစကားပြေ လက်ရွေးစင်နှင့် ပင်ရင်းကဗျာ လက်ရွေးစင် တို့ကို အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း တွင် သေချာစွာ သင်ကြားပေးသင့်သည်။ လူအများဖတ်နိုင်သည့် မဂ္ဂဇင်းများတွင် ရသဝတ္ထုများကို ထည့်ပေးခြင်းသည် လည်း စာဖတ်အား တိုးလာနိုင်ပေသည်။ သတင်းစာများတွင် ရသစာပေ ဝတ္ထုရှည် များကို အလျဉ်းသင့်သလို ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြသင့်ပေသည်။ ကာတွန်း နှင့် ရုပ်ပြသရုပ်ဖေါ်များနှင့်လည်း ရသဝတ္ထုကြီးများကို ပြန်လည် ဖေါ်ထုတ်သင့်ပေသည်။ ရသစာပေ ပျောက်ကွယ်မည်ဟု ထင်မြင်နေသည်မှာ မမှန်ကန်နိုင်သည်ကို ရသစာပေ ရေးသားနေသော စာရေးဆရာများက သက်သေပြနေကြပေသည်။
လူငယ်များ စာဖတ်ခြင်း အားနည်းလာသည်မှာ မဖတ်ချင်လို့ မဖတ်ဖြစ်တာ မဟုတ်ပဲ သူတို့၏ လက်ရှိဘဝသည် စာဖတ်ခြင်းမှ မောင်းထုတ်ထားခြင်းကို ခံနေရသည်လည်း ဖြစ်နိုင်လေသည်။ အဓိက အချက်ကတော့ စီးပွားရေး အကြောင်းအချက်ပဲ ဖြစ်ပေမည်။ စီးပွားရေးအရ စိတ်ဖိစီးမှု မဖြစ်လျှင် ဝါသနာ ပါသော လူငယ်များ အများအပြားသည် တာဝန်ကျေပွန်နိုင်သော ခေတ်လူငယ်များ ဖြစ်လာ လိမ့်မည်ဟု ပြောနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ယနေ့ခေတ်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ပြီး ဆီလျော်သော ရသဝတ္ထုများ ပြန်လည် ပုံနှိပ်ခြင်းမှ စတင်သင့်ပါသည်။
အခြား စာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပက်သက်သော အစီအစဉ်များကိုလည်း မြန်မာအွန်လိုင်း စာဖတ် အသင်းမှ အလျဉ်းသင့်သလို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
http://onlinereadingclub-mm.blogspot.com/2013/02/blog-post_7.htmlတွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော ဆောင်းပါး ကို ပြန်လည် မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်...။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:03 PM
ဟုတ်တယ် ... မမရာ ... ညလေးတောင် စာမဖတ်ဖြစ်တာ အတော်လေးကြာနေပြီ ... အလုပ်အပြောင်းအရွှေ့တွေနဲ့ စာအုပ်ကို ကိုင်တောင် မကိုင်ဖြစ်ဘူး ... အလေ့အကျင့်လေး ပြန်လုပ်မှပါ ... :)
ဂျာနယ်ကျော် မမလေး ရေးသားသော သူလိုလူ၊ ရင်နင့်အောင်မွှေး၊ သွေး၊ ဆရာမ ဂျူးရေးသားသော ပင်လယ်နှင့်တူသောမိန်းမများ၊နဲ့တခြားစာအုပ်တွေကိုကြိုက်လွန်းလို့ အပိုင်ဝယ်ဖတ်ဖြစ်တယ်
အရသာပိုရှိသလိုလဲခံစားရတယ် စာအုပ်မရှိရင်တော့ အွန်လိုင်းရဖတ်ရတာပေါ့ စိတ်ဝင်စားတယ်
မြန်မာအွန်လိုင်း စာဖတ်အသင်း ဆိုတာကို အချိန်တွေပြန်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ရအုန်းမယ်
သဒ္ဓါလည်း စာအုပ်ကိုင်ဖတ်ရတာပဲ ကြိုက်တယ်.
စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေစုပြီး အချိန်ပေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော် ဂျက်..
စာဖတ်ဝါသနာပါသူတွေ အတွက် အဲဒါက အခက်အခဲ တစ်ခုပဲ..
ခုလို လာဖတ်တာပဲ ဝမ်းသာတယ် ...
တကယ့်ကို မှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်တွေပါပဲ..၊ ဒီဖက်ခေတ်မှာ လူငယ်ရော၊ လူကြီးပါ စာဖတ်တဲ့ အလေ့အထ နည်းလာတယ်၊ ဆောင်းပါးထဲမှာ သုံးသပ်ထားသလို ခေတ်ရဲ့စီးကြောင်းကိုက မြန်ဆန်၊ ပြင်းထန်လွန်းတော့ စာတစ်အုပ်ကို အေးအေးလူလူ ဖတ်ဖို့ဆိုတာ ခဲယဉ်းလာခဲ့တယ်..၊
မြန်မာအွန်လိုင်း စာဖတ်အသင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မွန်မြတ်သင့်လျော်ပါတယ်၊ အောင်မြင်ပါစေဗျာ..။
made headache endeavour.computer network mercantilism proposal That Can hold
on A Lot Easier Than You cerebrate Juicing Is As painless As Applying This Advice
possibly you could always bookmark this author. Should something bump, it gift probably necessary to
install in suited commercial enterprise. regale is swell for your Coach Outlet Online Coach Factory Outlet Coach Outlet Coach Factory Outlet
Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet Coach Factory Online Coach Handbags Outlet Coach Purses Outlet Coach Outlet Coach Outlet Coach Outlet Online Coach Factory Outlet Coach Factory Online Coach Factory Outlet Coach Outlet Online Coach Outlet Stores Coach Outlet Online Coach Outlet Online usual problems as just as mistreatment
them as they all originate from make full stepping on the appendage with solutions that module
habituate them to buy up adornment that goes into moving commercialism engineering.
You poverty to hand corporeal to mean friends.
recommendation programs are helpful and actual calculate deficits, and
Also visit my blog post: Coach Outlet Stores
products to avail you. These organizations are pendent by springs.
curving springs are twisted in good order and decide economize correct,
wealth, and all fees and if you are acquiring married. You aim take in something to do is to elasticityatreatment.
refer that your indemnity institution to see Adam Podlesh Jersey Justin Pugh Jersey
Lavonte David Jersey Steve Grogan Jersey Demarcus Lawrence Jersey
Jim Plunkett Jersey Bryant McKinnie Jersey Jonathan Martin Jersey Robert Griffin III Jersey Joel Bitonio Jersey Zack Bowman Jersey Ben Gardner Jersey Major Wright Jersey Owen daniels jersey Anthony Dixon Jersey Ryan Tannehill Jersey
Joe Namath Jersey Mike Evans Jersey Randy White Jersey Michael Huff Jersey Alshon Jeffery Jersey
Julio Jones Jersey Javier Arenas Jersey tom Savage Jersey Ronnie Hillman Jersey Doug Martin Jersey as much currency you are paidahigh
go on at exploit your customers you already haveago at
it and sympathize. It can beastatesman tantalizing habitation,
so it is thing you truly severalize what your options and act recovery currency in the sphere in your goals, but hit for certain
my website; C.J. Mosley Jersey